Himalaya Dainik » गृहको प्रतिवेदन सार्वजनिक : रुकुम घटनाको योजनाकार वडाध्यक्ष !
गृहको प्रतिवेदन सार्वजनिक : रुकुम घटनाको योजनाकार वडाध्यक्ष !
ठमाडौं । पश्चिम रुकुममा ६ जनाको ज्या’न जा’ने गरी भएको सामू’हिक ह त्या प्र करणमा चौरजहारी नगरपालिका–८ का जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छ ।
वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले युवतीको घरमा आएका नवराज विक र उनको सातथीहरुलाई निय’न्त्रणमा लिने स्थानीयलाई भेला गर्नुका साथै नेपाल प्रहरीलाई समेत गुमराहमा राखेको पाइएको छ । घटनाको छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सह–सचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा बसेको टोलीको प्रतिवेदनमा वडाध्यक्ष मल्ललाई रुकुम घ’टनाको योजनाकार भनिएको छ ।
लकडाउनको समयमा जाजरकोटबाट केटाहरु छिरे भन्दै निय’न्त्रणमा लिने योजना बनाएको पाइएको छ । त्यसपछि ९८४८९६९७३३ नम्बरको मोबाइलबाट उनले मानबहादुर मल्ललाई ९८६६८६८९६८, नेत्रबहादुर मल्ललाई ९८४१५३७६७३ नम्बरमा फोन गरी गाउँलेलाई एकीकृत गराएको पाइएको छ ।
उनले आफ्नो मोबाइलबाट इलाका प्रहरी कार्यालय, चौरजहारीको ०८८–४०११०० नम्बरमा पनि फोन गरे । वि’वाद हुन लागेको भन्दै सूचना पनि दिए तर, स्थान भने उल्टो बनाइदिए । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘वडाध्यक्षले फोनमा ढुंगेखानीमा घट’ना भएको भनेर टिपाएका थिए, त्यसैले प्रहरी त्यता गयो । उनले औल जिउलामा युवाहरुलाई छे’क्ने योजना बनाएका रहेछन् ।’
वडाध्यक्षले ग’लत सूचना दिएका कारण प्रहरी समयमा घट’नास्थलमा पुग्न नपसेको पाइएको छ । वडाध्यक्ष मल्लसहित ३४ प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुकुममा कर्तव्य ज्या’न, ज्या’न मा’र्ने उद्योग र जा’तीय भे’दभाव तथा छु’वाछुत ऐन अनुसार कारबाहीका लागि मु’द्दा दर्ता भएको छ ।
रुकुम घ’टनाबारे गृह मन्त्रालयले जारी प्रतिवेदनः